Ubude nomgama And Weight kokukorwa kwetrayi Izixhobo | Gcina A Isitimela
Ubude nomgama And Weight kokukorwa kwetrayi Izixhobo
ekhaya > Ubude nomgama And Weight kokukorwa kwetrayi Izixhobo
Length Converter – ukuguqulwa Weight – distance okuguqula – Body Mass Index nokuguqulwa – izixhobo ukuguqulwa Ubushushu.
Smart Universal Units Conversion For Distance, Time, Amazinga And More
Esi sixhobo Unit Converter jikelele ziya kukunceda yomgama iguquka, ukuguqula ixesha, amaqondo obushushu aguqukayo, kunye nokuninzi, ngokukhawuleza nangendlela efanelekileyo, Sebenzisa ukwehla ezantsi ukukhetha iyunithi efanelekileyo yokuguqula ukusuka.
Weight Ukuguqula Tool
Le yunithi inguquko izixhobo widget kuya kukunceda ukuba enze kweyunithi yeentlobo ezahlukeneyo zemilinganiselo kungakhathaliseki ukuba uhlobo bathi ngokukhawuleza nje Lightning, faka inombolo ekunene kanye kuloo ndawo ekunene kwaye tyhala yelaseAkaya iqhosha.
Esinye isixhobo ukuguqulwa unit engaphezulu uguqulelo ubude kunye nokuguqulwa iiyunithi umgama ngoko xa ufuna ethile imigama ungakwazi ukuguqula, it has zonke iinketho kufuneka ukubala nokuguqula umgama ekuthethwa.
Namhlanje thina abazi sonke ngempilo yethu, ukuze nangona useholideyini, uyakuthanda kwaye usebenzisa Body wethu Mass Index – BMI Converter isixhobo, ukuze ubone ukuba usekhona ngokuma ngelixa sonwabile.
Imizekelo Of Ukusebenzisa Xa yethu Conversion Izixhobo:
Linganisa uguqulo ubunzima kunye nobunzima:
Xa kid yakho kufuneka uye kwi-ndinyuke roller, maxa wambi uya kucelwa ukuba ubunzima wakhe umlinganiselo ubunzima lendawo, izixhobo zethu iiyunithi ngentla converter kuya kukunceda uyilungise lo maze.
Kude kunye nobude yokuguqula:
Masithi ufuna ukubala kuya kuthatha ixesha elide kangakanani ukusuka imvelaphi enye ukuya kwenye, kodwa nje bafika kwilizwe apho ngekhilomitha isetyenziswa, UHAKUNA MATATA, ngenisa nje isixhobo unit ngekhilomitha, yaye iya ukuguqula koko uqhelene ngayo kule meko, kungaba miles.
Ubushushu isixhobo units lokuguqulela:
Ufuna ukwazi ukuba upakishe for uhambo lwakho, kwaye awuyazi ukuba ngaba Celsius okanye Fahrenheit, ngolunye uhlobo, iiyunithi lobushushu yethu yokuguqula, kuya kukunceda uzulazule la manzi.
Clothing ubukhulu lokuguqulela:
Ke ngoku ufikile indawo yokuthenga yohambo lwakho, kwaye kungekho nto, yintoni na ubukhulu unit yezihlangu, esinayo na isisombululo kuwe, ukusombulula lo mba Unit Converter ukuze ukwazi ukufumana isihlangu ekunene, shirt ekunene, uze ubuye uze ubonise waya abahlobo bakho ukuba onalo kwi uhambo.
– Kukho imizekelo emininzi ngakumbi apho ukwazi ukusebenzisa iiyunithi zethu converters, kukho nje amanye amatyala.
E Save A Train sisoloko sicinga okuhamba uloliwe abafundi bethu blog kunye website train nokubhukisha abaxhasi, thina ngokunjalo wamnika izixhobo zethu zohambo yaye yasungula iiyunithi ezinkulu lokuguqulela izicelo kuwe ukufumana kube lula ukuguqula Weight, kodwa iyakwazi ukwenza nokuguqulwa speed, nokuguqulwa umgama kunye nokuguqulwa Ubushushu, yaye baninzi ngaphezu kweeyunithi noguqulo ezahlukileyo ukusuka kwilizwe lakho ekhaya apho uhamba ku.
Length yethu Converter And Distance Converter And Weight Converter Izixhobo kube lula ukuyisebenzisa iinjongano ngoko akuyi kufuneka ukuba sokuchitha ngaphezu 5 imizuzwana xa seeings amanani unit ezifuna kweyunithi kwaye ukwazi ukwenza izigqibo zakho abaliweyo fast and ngokuchanekileyo.
Sinezixhobo ezininzi zakho:
Ikhalenda yeholide, fumana imihla yeholide ngokulula kangangoko kunokwenzeka.
Isixhobo semozulu epholileyo, Ukuba usekhaya kwaye uyazibuza malunga nemephu yemozulu okanye iidigri kwenye indawo, Le yeyakho.
Umhloli wexesha, esona sixhobo sinomdla wokujonga ixesha naphi na!
Isibali-mali, Ekugqibeleni isiguquli semali kunye nekhaltyhuleyitha ekulula ukuyisebenzisa.
Isiqinisekiso seCarbon Footprint, yazi ngqo ukuba wenza malini kwiplanethi kuxhomekeke kwindlela yothutho oyikhethayo
Umdlalo weMephu yokuHamba, sebenzisa indoda encinci etyheli, Ukutsala uye naphi na emhlabeni kwaye ubone iifoto zangempela zokukhuthaza.
Uluhlu lokutshekisha lwabahambi, isicelo esidibeneyo esivumela ukuba ukhethe uhlobo lwakho lokuhamba kunye nesizathu, kwaye nje ukuba ufake iinkcukacha, uyakufumana uluhlu oluchanekileyo lwezinto zokupakisha.
Iindleko zokubala ikharityhulam, Khetha ilizwe ukusuka ezantsi, kwaye ubone ukuba kungabiza malini ngosuku ukuya kwilizwe ngalinye emhlabeni.
Umdlalo woLoliwe, Yiba ngumqhubi kaloliwe kwaye uqhube oololiwe ukuya apho baya khona, umdlalo omnandi nowonwabisayo kuyo yonke iminyaka.
Ngaba wonwabile namaCandelo zethu converters izixhobo, siyathemba ukuba wenze, kwaye wenza, siya konwaba xa kusixhasa umva kwaye usebenzise Train yethu ithikithi injini na Best kanti Amatikiti Ukuqeqesha Amaxabiso, Gcina A Isitimela.
Ingaba ufuna kuzakulungisa eli phepha kwi sayithi yakho, nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funits%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / de kuyo / iilwimi / okanye nl yaye ngaphezulu.